Xildhibaan C/llaahi Sheekh Ismaaciil oo ku baaqay in dib u heshiisiin laga sameeyo magaalada Marka – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka jira magaalada Marka ee xarunta Gobalka Shabeelaha Hoose waxa uuna soo dhoweeyay maamulka cusub ee Magaalada loo magacaabay.
C/llaahi Sheekh Ismaaciil ayaa sheegay in magaalada Marka ay ka dhacayn dagaalo ay ku dhintayn dad badan oo shacab ah sidoo kalane dagaaladaasi laga dhaxlay dhibaatooyin kale oo soo gaaray degaanka iyo dadkii ku noolaa waxa uuna ku taliyay in laga shaqeeyo dib u heshiisiin loo sameeyo dadka degaanka.
“Waxaan ku talinayaa in dib u heshiisiin loo sameeyo dadka ku nool magaalada Marka oo muddo dheer colaad beeleed u dhaxaysay” ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Sheekh Ismaaciil oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan C/llaahi Sheekh Ismaaciil ayaa ugu baaqay Guddoomiyaha cusub ee magaalada Marka C/llaahi Waafow in uu ka shaqeeyo sidii is faham loogu dhax abuuri lahaa dadka ay colaadda u dhaxayso ee kuwada nool degmadaasi si looga soo kabto aafooyinkii ka dhashay dagaallo mudo 5 sano ka badan ka socday Marka.
“Guddoomiyaha cusub waxaan ugu baaqayaa in uu isfaham ka dhax abuuro shacabka marka si ay uga soo kabtaan aafooyinkii ka dhashay dagaaladii dadka degaanka dhaxmaray” ayuu yiri C/llaahi Sheekh Ismaaciil oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS.
Xildhibaan C/llaahi Sheekh Ismaaciil ayaa hadalkaan ka sheegay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu soo dhowaynayey Guddoomiyaha cusub ee magaalada Marka ee xarunta Gobalka Shabeelaha Hoose.
Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka oo maanta ka furmaya Muqdisho